Ireo Nahita Voalohany An’ilay Zava-tsarobidy | Diary 2015
Ireo nahita voalohany an’ilay zava-tsarobidy
Ny alahady 1 Aprily 1945 i Lennart sy Virginia Johnson no nigadona teto amin’ny renivohitry ny Repoblika Dominikanina. Ciudad Trujillo no anaran’ilay renivohitra tamin’izany, fa Saint-Domingue ankehitriny. Nahazo diplaoma tamin’ny sekolin’i Gileada i Lennart mivady, ary izy ireo no Vavolombelon’i Jehovah voalohany teto. * Hoy ny Diary 1946: “Nisava lalana ara-bakiteny ireo misioneran’i Gileada ireo. Izy ireo no nanomboka ny zava-drehetra tao amin’ilay faritany.” Eritrereto ange e! Tany vao avy nanjakan’ny ady no novantaniny. Tsy nisy biraon’ny sampana teto, na Efitrano Fanjakana, na fiangonana. Tsy nisy olom-pantany koa, nefa izy ireo tsy dia nahay niteny espaniola. Tsy nanana trano na fanaka koa izy ireo. Ahoana no hataony amin’izany?
Hoy i Lennart: “Nankany amin’ny Hotely Victoria izahay ary nahita efitra hipetrahana. Dimy dolara isan’andro ny hofany miaraka amin’ny sakafo.” Hoy koa izy: “Tamin’io tolakandro io ihany izahay dia efa nanomboka fampianarana Baiboly. Nisy vehivavy dominikanina roa izay mantsy nampianarinay Baiboly tany Brooklyn. Nomeny anay ny anaran’ny havany sy ny olom-pantany teto, ary anisan’izany ilay hoe Dr. Green. Nankany an-tranony izahay, ary hitanay tao koa i Moses Rollins, mpiray tanàna taminy. Nolazainay tamin-dry zareo ny fomba nahazoanay ny anarany sy ny adiresiny. Nihaino tsara ny hafatra notorinay izy ireo, ary nanaiky hianatra Baiboly. Tsy ela i Moses dia nitory, ary izy no Dominikanina voalohany nanao izany.”
Tonga koa ny misionera efatra fanampiny, tamin’ny Jona 1945. Nahapetraka boky sy gazety be dia be izy ireo taoriana kelin’izay, ary nahazo fampianarana Baiboly maro. Hita hoe nila toerana hivoriana izy ireo, nony tonga ny Oktobra. Novany ho Efitrano Fanjakana vonjimaika àry ny efitra fandraisam-bahininy sy ny efitra fisakafoany. Nisy 40 be izao ny mpanatrika!
Anisan’ireo voalohany nanaiky ny fahamarinana i Pablo Bruzaud, fantatra tamin’ny anarana hoe Palé. Mpitantana zotra-na bisy nampitohy an’i Santiago sy Ciudad Trujillo izy, ka nanketo an-drenivohitra matetika. Tafaresaka tamin’ny Vavolombelona izy, indray andro, ary nandray an’ilay boky hoe “Ny Marina Hahafaka Anareo Tsy ho Andevo.” Lasa nianatra Baiboly isan’andro izy. Tsy ela izy dia niara-nitory tamin’ireo misionera, ary niantoka ny fitaterana azy ireo mihitsy aza. Nihaona tamin’i Lennart Johnson teto Ciudad Trujillo izy, tatỳ aoriana, ary niaraka taminy nanao fitsidihana. Nizotra nankany Santiago ny dian’izy ireo, namakivaky tendrombohitra, mandra-pahatonga tany Puerto Plata, tanàna amoron-tsiraka. Nisy olona liana vitsivitsy mantsy tao. Efa nanoratra tany amin’ny foibe any Brooklyn, Etazonia, ireo olona ireo satria nila fanampiana.
Tonga teto ny Rahalahy Knorr sy Franz
Tonga teto i Nathan Knorr sy Frederick Franz, avy any amin’ny foibe, tamin’ny Martsa 1946. Efa tsy andrin’ny olona ilay fitsidihana. Nisy 75 ny olona liana nanatrika ny lahatenin’ny Rahalahy Knorr, ankoatra ny Vavolombelona. Tiany hasiana biraon’ny sampana teto, ka tamin’io diany io no natomboka ny fikarakarana nifandray tamin’izany.
Ny Rahalahy Knorr sy Franz, teo amin’ny Efitrano Fanjakana teto Ciudad Trujillo. Io no efitrano voalohany teto amin’ny Repoblika Dominikanina
Nihamaro ny misionera tonga. Nisy 28 ny mpitory nanerana ny Repoblika Dominikanina, tamin’ny faran’ny taom-panompoana 1946. Vao nanomboka ny asa fitoriana teto tamin’izany, ka nandany fotoana be mihitsy ireo misionera isan-kariva nanamboatra ny sarin’ny faritany. Tian’izy ireo ho azo antoka mantsy hoe ho voalamina sy ho vita tsara ny asa fitoriana.
Nitatra ny asa
Nisy 60 teo ho eo ny mpitory tamin’ny 1947. Tamin’io taona io koa no nafindra teto ny misionera vitsivitsy nanompo tany Cuba, ary anisan’izany i Roy sy Juanita Brandt. Voatendry ho mpikarakara ny sampana ny Rahalahy Brandt, ary nitana an’io andraikitra io foana izy nandritra ny folo taona.
Nisy 110 teo ho eo ny mpitory nanompo niaraka tamin’ireo misionera, tamin’ny faramparan’ny taom-panompoana 1948. Nananontanona anefa ny fotoan-tsarotra tamin’izay, ary tsy nanampo an’izany ireo mpitory mazoto ireo.
^ feh. 1 Efa hatramin’ny 1932 ny boky sy gazetintsika no nozaraina teto amin’ny Repoblika Dominikanina. Rehefa tonga teto anefa ry Johnson, tamin’ny 1945, vao nahazo fanampiana ny olona liana.